चकनाचुर पारिदियो सपना सबै ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालले
काठमाडौं, २३ साउन । कति सपना देखेका थिए दोर्जे लामा र निशाले आफ्नो दोस्रो सन्तानका बारेमा ! तर यो सपना सबै चकनाचुर पारिदियो ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालले । पहिलो बच्चा १० बर्ष भैसकेकाले दोस्रो बच्चाको योजना बुनेको दोर्जे दम्पत्तिले ग्राण्डीका डा. पवनराज पन्तसँग झण्डै डेढ बर्षदेखि सल्लाह लिँदै आएको थियो । डा. पन्तकै सल्लाहमा दोस्रो बच्चा जन्माउने योजना बनाएका उनीहरू गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा बसेको खबरले थप गद्गद् थिए ।
सोही अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले भने महाराजगंज प्रहरी बिटबाट खटिएका प्रहरीको रोहबरमा अस्पताल र चिकित्सक कर्मचारीको कमजोरी स्वीकारे पनि उनीहरुउपर कुनै कारवाही नभएको बताए ।
उक्त अस्पतालप्रति धेरैको धारणा सकारात्मक नभएको दावी गर्दै समाचार स्रोत भन्छ–बिरामीमाथि आर्थिक र मानसिक शोषण गर्दै आएको देख्दा ठूलो आक्रोस उम्लिन्छ । अस्पतालको अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल मान्छे मरिसक्दा पनि गम्भीर छैनन् । उनीहरू उल्टै लाचार हुँदै भन्छन्–मिडियाबाट सुनेका हौँ, लिखित उजुरी नपरेकाले छानविन गरेका छैनौं । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
२०७६ श्रावण २३ बिहीबार ०६:५६:०० मा प्रकाशित